I-Tux Paint 0.9.25 iza nokuphuculwa kwezixhobo, ikhibhodi ekwiskrini kunye nokunye | Ubunlog
I-Tux Paint 0.9.25 ifika kunye nokuphuculwa kwezixhobo, ikhibhodi ekwiskrini kunye nokunye
Ubumnyama | | isiNxulumanisi
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo kukhutshwa inguqulelo entsha yeTux Paint 0.9.25, eza nolunye uphuculo kwizixhobo zokuzoba, kunye nokuphuculwa kwekhibhodi esikrinini kunye nokuthumela imifanekiso ngaphandle.
Kulabo abangaqhelananga neTux Paint, kufuneka bayazi loo nto Inkqubo yenzelwe abantwana ukusuka kwiminyaka emi-3 ukuya kweli-12 ubudala Kwaye ekuqaleni yayidalelwa ukuba isebenze phantsi kwenkqubo yokusebenza ye-GNU / Linux, kuba zazingekho izicelo ezifanayo zokuzoba abantwana ngelo xesha.
Kubhaliwe kulwimi lwenkqubo yeC kwaye isebenzisa amathala eencwadi asimahla.
Ipeyinti yeTux ime kwezinye iinkqubo zokuhlela (njenge-GIMP okanye i-Photoshop) ukusukela oko Yenzelwe ukuba isetyenziswe ngabantwana abaneminyaka emithathu ubudala. Ujongano lomsebenzisi lwenzelwe ukuba lubenomdla, kwaye lisebenzisa ii-icon, amagqabantshintshi avakalayo, kunye neengcebiso zokubhaliweyo zokuchaza ukuba isebenza njani le nkqubo. Iziphumo zesandi kunye nemascot (iTux, evela kwiLinux) zenzelwe ukubandakanya abantwana.
Ujongano lomsebenzisi we Ipeyinti yeTux yahlulwe yangamaphaneli amahlanu:
Ibar yesixhobo, kubandakanya izixhobo ezisisiseko ezinje ngokupeyinta okanye ukuzoba imigca, kunye nolawulo njengokulungisa, ukugcina, ukuphuma, okanye ukuprinta.
I-Canvas, isithuba sokuzoba nokuhlela imifanekiso.
Iphalethi yombala, enemibala eli-17 esele icwangcisiwe kunye nenketho yokukhetha isiko.
Isikhethi, sibonelela ngezinto ezahlukeneyo ezinokukhethwa (umzekelo iibrashi, itypography okanye izixhobo ezingaphantsi, kuxhomekeke kwisixhobo esikhoyo).
Indawo yolwazi enemiyalelo kunye neengcebiso.
1 Izinto ezintsha ezinqabileyo zeTux Paint 0.9.25
2 Uyifaka njani iTux Paint ku-Ubuntu nakwiziphumo?
Izinto ezintsha ezinqabileyo zeTux Paint 0.9.25
Kule nguqulelo intsha yeTux Paint 0.9.25, njengoko besesitshilo ekuqaleni, ukuphuculwa kwamkelwa kwizixhobo zesicelo, enye yazo umzobo wemilo uphuculwe kakhulu kwaye ibiyintoni kunokwenzeka ukukhetha indlela yokubonisa indlela embindini okanye kwikona, ngokunxulumene nesikhombisi.
Olunye utshintsho olukhankanyiweyo kwisibhengezo, kukuba ikhibhodi ekwiskrini ilungiselelwe abo bangaboni kakuhle kwaye ngoku ikhutshiwe kwizikrini ezinkulu.
ngaphandle koko Indawo zokucoca ezicocekileyo zongezwa kwi-eraser kunye nokuthamba komgca wokucoca kuphuculwe xa isikhombisi sihamba ngokukhawuleza.
Kuyacaciswa ukuba amandla ongezelelweyo okuthumela ngaphandle imifanekiso nganye njengomfanekiso oopopayi kwifomathi yeGIF.
Okokugqibela, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngale nguqulo intsha, ungazijonga iinkcukacha kwi ukulandela ikhonkco.
Uyifaka njani iTux Paint ku-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo abanomdla wokukwazi ukufaka esi sicelo kwinkqubo yabo, banokwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Ngokubanzi Ubuntu kunye nokuphuma kwesicelo kufumaneka ngaphakathi koovimba amagosa okusasaza, kodwa hayi kuhlobo lwamva nje. Kungenxa yoko le nto abo bafuna ukufaka inguqulelo yamva nje evela koovimba bolwabiwo lwabo kufuneka balinde ukuba ifumaneke.
Ufakelo lunokwenziwa ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Ngoku kwabo bafuna ukufaka uhlobo olutsha lweTux Paint 0.9.25 ngendlela elula kwaye ngaphandle kokubhenela ekuhlanganiseni ikhowudi yemvelaphi, baya kuba nakho ukuyenza ngoncedo lweephakeji zePlppak.
Ukulungiselela le nto, kwanele ukuba nenkxaso yongezwa kwinkqubo kwaye masongeze indawo yokugcina izinto ze-flathub Egcina uluhlu olukhulu lwezicelo ze-flatpak, kubandakanya i-Tux Paint, koku kufuneka sivule i-terminal kwaye siza kuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Sele songeze indawo yokugcina iFlathub, faka nje usetyenziso ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Kwaye voila, xa sinokuthi siqale ukusebenzisa esi sicelo kwinkqubo yethu. Ukuqalisa usetyenziso, jonga nje ukuba inokuphunyezwa kwimenyu yezicelo.
Kwelinye icala, ukuba unomdla wokuqokelela ikhowudi yemvelaphi yesicelo, unokujonga ulwazi malunga nalo kunye nokukwazi ukufumana ikhowudi yemvelaphi yesicelo. Kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Tux Paint 0.9.25 ifika kunye nokuphuculwa kwezixhobo, ikhibhodi ekwiskrini kunye nokunye
IMozilla isebenza ngenkangeleko entsha yeFirefox
I-Otter 1.0.2 iye ilungise ezinye iibhugs zenguqulo yangaphambili